श्रीमान्‌लाई छाडेर कुकुरसँग बिहेको फोटो शूट ! |
Home विचित्र संसार श्रीमान्‌लाई छाडेर कुकुरसँग बिहेको फोटो शूट !
तर एकजना अमेरिकी बेहुलीले भने आफ्नो पाल्तू कुकुरसँग बिहेको फोटो शूट गराएपछि चर्चा कमाएकी छिन् ।घरको कुकुरसँग वेडिङ फोटोशूट गराउने ती युवतीको नाम हाना किम हो । हालै किमले आफ्नो पूरानो साथी जेरार्ड ब्रिकम्यानसँग बिहे गरेकी छिन् ।
फोटोशूटका क्रममा कुकुरलाई पनि सिँगारिएको थियो। तस्वीरमा हाना हातमा फूलको बुके लिएर उभिएकी छिन् भने उनको अगाडि घाँटीमा घाँटीमा फूलको फुर्को लगाएर टुसुक्क बसेको छ। विभिन्न तस्वीरमा कुकुरले हानालाई चुम्बन गरेको पनि देखिन्छ । वेडिङ फोटोशूटका तस्वीरहरु शेयर गर्दै हानाले भनेकी छिन्, ‘मेरो विशेष केटासँग एक क्षण ।’
प्रेमकथाका विशेष मैले भन्ने कुरा यत्ति हो।’ स्मरण रहोस् हानाका घरमा अरु दुईवटा कुकुरहरु पनि छन् । हाना र जेरार्डको भेट सन् २०१४ मा तिनै कुकुरहरुकै कारण भएको थियो । त्यसबेला नै उनीहरुले ती विशेष कुकुरहरुलाई आफ्नो बिहेमा सहभागी गराउने बाचा गरेका थिए । एजेन्सीको सहयोगमा